SAGE MIRO IYO DAAWO: SIDA LOO KALA SAARO DHIRTA - DHIRTA DAWOOYINKA
Sage, ama salvia - mid ka mid ah geedaha ugu faa'iido badan. Luqad, oo loo turjumay sida "caafimaad leh." Daawada, salvia waxaa loo isticmaalaa daawooyinkaas caan ah ee caan ah sida chamomile iyo calendula. Si sahlan loo aqoonsan karo midab buluug ah oo leh buluug ah iyo caraf udgoon. Waxaa jira noocyo fara badan, oo dhammaantood waxay leeyihiin shakhsi shakhsi iyo caruus. Maanta waxaan eegnaa noocyada noocyada dhirta - qoyaan cagaaran iyo daaweyn isbitaal. Aynu sheegno sida ay u egyihiin, sida loo kala saaro midba midka kale iyo waxa ay leeyihiin hantida faa'iido leh.
Muxuu qadada cagaaran u eg yahay
Salvia moodhka - aad u sarreeya (ilaa 80 cm dhererka) dhirta cagaarka ah ee cagaarka ah, oo loo qaybiyey Yurub oo dhan. Waxay ku koraan geesaha kaynta, beeraha, dabaylaha iyo cawska. Maqaalka waa mid toosan, fudud, oo ka sarraysa inflorescence oo laga soocayo salka. Inta lagu jiro muddada ubax, dhirta soo jiidata leh ubax qurux badan oo qurux badan oo caraf udgoon leh.
Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore, wadaaddada Masaarida ka dib markii cudurro faafa ah ama dagaallo burburin ah ayaa dumarka oo dhan ku qasbay in ay isticmaalaan dib-u-hagaajinta sajinta, si loo kordhiyo tirada dhalashada iyo tirada dadka.
Caleemaha waa la dhajiyay, lanceolate, kor u jeedo iyo hoos u dhicin, oo ku yaalla asliga ah ee amarka ka soo horjeeda. Hooska hoose ee caleemaha waxaa lagu daboolay timo dhaadheer oo dhaadheer, dusha sarena waa siman yahay. Miraha - qanjirrada cawska ah ee saddex-geesoodka ah 2mm dhexroor. Warshadu waxay u baahan tahay ciidda loamy, qorraxda, meelaha bannaan. Waxa kale oo lagu koray sidii warshad ornamental ah ee beerta khudradda iyo beeraha.
Dhirta ama geedo badan oo geedo ah. Hoyga wadankiisa waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay Italy iyo Southeastern Europe. In qaabka duurjoogta ah, Salvia officinalis waxaa lagu qaybiyaa dalalka Jasiiradda Balkan iyo Mediterranean. Warshadda waxaa lagu beeray Talyaaniga, Faransiiska, Giriigga, Slovakia, Czech Republic, Ruushka, Moldova, Ukraine, dalalka Yugoslavia hore iyo dalal kale.
Dhirta badani waxay leeyihiin waxyaabo daweyn: dufan, duufaan, kupena, cagaarka, melissa, cuncunka, xiirto, xashiishad, kalluun, maqaayad buur, miro yar, gentian.
Salvia officinalis ayaa ku kora beeraha, beeraha, beeraha. Warshadu waa thermophilic, jimicsi leh daboolka barafka ee aan ku filneyn iyo garafyada daran. Warshadu waa abaarta u adkaysata, ma u dulqaadanayso qoyaan xad dhaaf ah. Waxay leedahay awood xoog leh, qoryo leh, jeexjeexan, rooti macquul ah oo ka hooseeya. Qalabku waa ciriiri, jeexan yahay, qoryaha hoose, iyo cawska, koriinka, dhererka, oo gaadhaya ilaa 70 cm.
Caleemaha waa kuwa ka soo horjeeda, ka soo horjeeda, 0.8-4 cm oo ballaaran iyo 3.5-8 cm dheer, caajis ama fiiqan, wedge-qaabeeya ama ku wareegsan saldhigga, iyo yar-goglan geesaha. Ubax oo midab buluug ah oo caleemo leh, mid aad u yar ama midab madow, laba-lipped, ayaa lagu dhejiyaa santuuqa llorescences sare. Caleemaha qulqulaya ubaxu waxay dhacaan May-July, iyo Bisaylka miro - bisha Agoosto-Sebtembar. Warshadu waxay bilaabmaysaa in ay Bloom sanadka labaad. Miro ayaa ku jira qaab ah qoyaan, bunni madow, wareegsan, 2.5 mm dhexroor.
Ma taqaanaa? Masaarida waxaa loo aanaynayaa in lagu qiimeeyo sifooyinka suugaanta kuwaas oo gacan ka geysanaya in uu sii dheeraado nolosha. Waxaa la rumaysan yahay in ay sii dheeraanayaan nolosha waxay noqoneysaa mid ku filan oo kaliya inay soo saarto salvia beerta.
Waa maxay farqiga u dhexeeya bukaanka dhirta iyo cagaarka (dhulka)?
Mararka qaarkood waxay isku dhexfadhiyaan. Laakiin cagaarka qoyan waxaa ka muuqda waxyaabo badan oo la daaweyn karo oo ka badan daawooyinka, taasina waa farqiga ugu weyn ee ay leedahay. Foornada qoyaanka ee cagaaran waa mid yar oo la jilciyo phytoncides iyo saliidaha lagama maarmaanka ah, waxay ku koraan duurjoogta waxaana ku dhowaad marna loo isticmaalin daawada dhaqameed.
Caleemaha ma laha sida ur xoog leh, oo u eg sida daawada, iyo ubaxyadu ma leeyihiin wax uraya dhammaan. Khilaafaadka dibedda ee labada nooc ayaa ah kuwo aan muhiim ahayn. Caleemaha waa daaweyn aad u yaryar oo leh hoosto silvery ah, halka ubaxyada ay leeyihiin hooska yar ee buluug.
Dhammaan runta iyo beenta ku saabsan sifooyinka wanaagsan ee labada nooc
Warshadda waxaa lagu dhajiyay qadar aad u ballaaran oo hanti ah. Ujeedooyinka daaweynta, dushooda dhirta waxaa loo isticmaalaa ubaxyo iyo caleemo. Waxay leedahay anti-joojin, xanuunka, farsamada, duriinka, anti-bararka, estrogenic, jeermiska, fiisaha, carminative, saameynta hemostatic on jidhka bini'aadamka.
Waxay daweeyaan cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirka, cudurada kelyaha, beerka, caabuqa fayraska, cunaha, qufaca, parotitis, bronchitis, sciatica, dhiigbaxa, gingivitis, neuritis, polyarthritis, diabetes.
Waa muhiim! Phytosterols, oo ku jira caleemaha salvia, waxay leeyihiin calaamado lagu daaweynayo haweenka taranka dumarka waxayna gacan ka geysan karaan rimidda.
Dhirtaas waxay yareyneysaa xiiqda neefta, daaweynta dhibaatooyinka cudurada haweenka (nabarrada afka ilmagaleenka, bararka xuubka haweenka, xakamaynta wareegga dhiigga, xayawaanka wareegga, yaraynta calaamadaha menopause) iyo cudurrada maqaarka (boogaha, boogaha, cudurka psoriasis, gubashada, barafoobka, furuncles).
Warshad waxaa loo isticmaalaa in lala dagaallamo cudurrada sambabada, mareenka kaadida, si loo yareeyo qufaca iyo wax ka badan. Waxay ka caawineysaa in uu kufsado, wuxuu dhiirrigeliyaa isbedelka dhammaan qaybaha habka dheef-shiidka iyo rabitaanka cuntada. Intaa waxaa dheer, waxay hagaajineysaa xasuusta, kordhisaa dareenka, waxay hagaajisaa waxqabadka.
Sage waa deris wanaagsan oo loogu talagalay dalagyada khudaarta: karootada, strawberries, yaanyada, dhammaan noocyada kaabajka.
Sage saliida lagama maarmaanka u ah isticmaalka kareemka jirka. Aromotherapy leh saliid lagama maarmaan ah ayaa loo isticmaalaa si loo yareeyo walbahaarka, madax-xanuun, niyad-jabka maskaxda. Maraq waxaa loo isticmaalaa sida timo biyo ah si loo siiyo wax dhalaalaya, ka takhalustaan ​​dabacsanaan iyo kicinta koritaankooda.
Marka laga soo tago faa'iidooyin cad, sage wuxuu leeyahay khataraha aadka u daran:
Waa mamnuuc in dumarka uurka leh mudo gaaban, sababtoo ah waxay kor u qaadeysaa tayada ilmo-galeenka (waxay u horseedi kartaa dhicis ama xajisashada mandheerta xilliga dambe) waxayna yareysaa wax soo saarka progesterone.
Marka naas-nuujinta, sida uu joojiyo nuujinta.
Noocyada naasaha, endometriosis, ka dib marka laga saaro kansarka ilmo-galeenka iyo qanjidhada naasaha (heerarka estrogen ee sareeya).
Iyadoo dhiig-karka (wuxuu kordhiyaa cadaadiska dhiigga).
Iyadoo nephritis, pyelonephritis, glomerulonephritis, inflammation degdeg ah ee kelyaha.
Iyada oo la yareeyo shaqeynta qanjirka.
Marka qufacayo (qufac ayaa laga yaabaa inuu kaliya sii xoojiyo).
Maqnaanshaha miyuu ku fiican yahay? Dabcan! Waxay leedahay waxyaabo badan oo faa'iido leh: toning, bogsashada boogta, bakteeriyada, fayras, anti-bararka, fungicidal, tonic, durayo, hypotonic, hemostatic, antispasmodic.
Waa muhiim! Isticmaalka mudada dheer ee daawada salvia waxay sababi kartaa sumo halis ah.
Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo neefta, neurosis, cudurada maqaarka, boronkiitada, neurasthenia, xanuunka, scrofula, isnadaamiska, caabuqyada neefsashada, cudurada mudada dheer, stomatitis, laabotimanka, iyo xanuunada caloosha. Iyada oo gacan ka heleysa qoyaanka cagaaran ayaa yarayn kara xanuunka dumarka la xiriira caadada. Waxay leedahay hawada sare u qaadista dheefshiidka, jeermi-dilista, xannuunada rheumatic, nabarrada bogsata iyo gubashada.
Qubeyska aromatic leh salvia saliida lagama maarmaanka ah ayaa kaa caawineysa in ay yareyso murqaha iyo murugada dareenka. Dareeraha ayaa sidoo kale xakameyn doona madax xanuun iyo neefsashada markaad qabtid hargab. Carafka basbaaska leh ee dhirta waxaa loo isticmaalaa sida cadar iyo xawaash udgoon.
Waxaa la ogyahay in ay u isticmaalaan kiknoolajiyada loogu talagalay xoogga koritaanka timaha iyo daaweynta maqaarka dhibaatada leh. Waxaa loo isticmaalaa labadaba gudaha iyo dibedda, qaabka neefta, barkadaha, tinctures, cadaadiska, iyo decoctions. Laakiin waa lagama maarmaan in la isticmaalo cawska sage ee cudurrada bararka ee kelyaha, dulqaad shakhsi ah si ay cawska, amenorrhea, hypotension, uurka iyo nuujinta.
Waa muhiim! Isticmaalka dheer ee warshadan laguma talinayo. Fasaxyada waxaa loo baahan yahay labadii ilaa seddex bilood oo ka mid ah cawska qoob-ka-baxa.
Labada dhirta - iyo caleemaha, iyo xitaa daaweyn badan oo daawada ah - aad u faa'iido leh waxayna ku heleen codsigooda daawada iyo karinta.